Sida loo rafcaan qaato Diidmada Liisanka Cannabis ee Illinois - Maxaa la Sameeyaa Markaadan guuleysan.
Aan Ku qorneyn
Waxaa qoray Tom "Qareenka Warshadaha Cannabis" Howard
Dhamaadka koorsadan, waxaad:
hayso dacwad qabyo ah oo 4-tiris ah.
Waad ogaan doontaa meesha laga xareeyo,
goorta ay tahay in la xareeyo.
Maxaa dhici kara markaad
iyo xitaa sida loo helo qareen maxalli ah oo kaa caawiya ka bixitaankaaga.
Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonnaa kharashyada la xiriira waxa aad la kulanto.
Waxaa intaa dheer Waxaad heli doontaa foom loogu talagalay a Amarka Xakamaynta Ku-meelgaarka ah (TRO) oo ah dhaqdhaqaaqa degdega ah ee TRO. Si Loo Joojiyo Bakhtiyaa-nasiibka - ama isku day inaad.
Ugu dambeyntiina, labo ka mid ah sababaha ficilku waxay raadinayaan inay soo ceshadaan lacagtii aad ku maalgashatay warshadaha xashiishadda ee ay waxyeellada u geysatay KPMG oo si khaldan u dhaliyay dalabkaaga - haddii taasi runti tahay wixii kugu dhacay.
Waxaan sidoo kale ka wada hadalnaa waxaad sameyn karto ka sokow xareynta dacwad - Beddelidda CRTA & Cusbooneysiinta Codsiyadaada.
Waxay la imaaneysaa $ 2,000 celcelis dhibic ah macaamiisha doonaya inay horay u socdaan iyagoo ilaalinaya xuquuqdooda.
Kaliya 1aad 10 si aad Isqorto hel Qiimo Dhimis.
Markaa Codsigaagu ma ahayn mid “Dhamaystiran”
Kaliya 21 koox loo doortay inuu noqdo mustaqbal heysta shaybaarka caafimaadka ee Illinois.
Kooxdaada kuma jirin liistada, sida kuwa kale ee 97% codsadayaasha ah.
Waxaad dareemeysaa gogol dhaaf iyo qalad.
Haddii aad tahay ruug caddaa bulsho, waa ku caawin karnaa.
Haddii aad tahay codsade sinnaan bulsheed oo caadi ah, annagana waan ku caawin karnaa.
Xaqsoor Bulsho Kali Kuma Noqon
Istaraatiijiyaddaadu way isbeddeli doontaa iyadoo kuxiran haddii aad tahay codsade ruug caddaa bulsho, ama mid caadi ah.
Wadada codsadayaasha sinaanta bulshada caadiga ah aad ayey uga qaalisan tahay, laakiin taasi waa caadi maxaa yeelay waxaan sidoo kale bixineynaa wax ka badan oo kaliya cabashada, waxaan bixinaa wax ka badal sharci dejin ah oo furaya
Maxaad Ka Heshaa Koorsadan
Dhamaadka koorsadan, waxaad heli doontaa cabasho qabyo ah oo 4-tiris ah. Waad ogaan doontaa meesha laga xareeyo, goorta ay tahay in la xareeyo. Maxaa dhici kara marka aad sameyso, iyo xitaa sida loo helo qareen maxalli ah oo kaa caawiya ka bixitaankaaga. Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonnaa kharashyada la xiriira waxa aad la kulanto.
Intaa intaa ka badan, waxaad heli doontaa foom Ku-meel-gaadh ah Ku-meel-gaadh ah Ku-meel-gaadh ah (TRO) iyo mooshin deg-deg ah oo loogu talagalay TRO.
TRO waxay joojin kartaa bakhtiyaanasiibka, ama liisamada abaal marinta gobolka - ilaa Dib u eegida Maamulka ee dhibcaha codsadahaaga.
Waxaan sidoo kale ka wada hadalnaa waxaad sameyn karto ka sokow xareynta dacwad. Waxaan ka gudubnay nidaamka codsiga FOIA si aad u hesho natiijadaada oo aad u bilowdo hagaajinta wareega labaad.
Laakiin sug, Wareegga 2 wuxuu u baahan yahay isbeddel si loo gaaro yoolalka Sinnaanta Bulshada ee CRTA.
Waa inaan xiranaa tirada shatiyada wareega xiga ee laga bixinayo 10 - taas oo sababtay calaamadda 21 KELIYA oo ka mid ah in ka badan 700 oo koox.
Haddii aan wax ka beddelno CRTA, ama sharciyadiisa, ka dib waxaan albaabbada u furi karnaa S dheeraad ah sinnaanta bulshada Wareegga 2aad.
Waxaa laga yaabaa in marka xigta 55 koox ama in ka badan ay la aadaan mid ka mid ah liisamada lagu iibiyo xashiishadda qiimaha leh ee Illinois.
Waxaad heli doontaa TRO-gaaga iyo qoraal cabashada ka mid ah, FOIA codsi socod, iyo luqadda wax-ka-beddelka, ka dib markaad koorsada qaadatid oo aad fahanto doonida aad ku jirto iyo halka ay kuu qaadi karto marka xigta.
Dacwad Qabyo ah
Fahamka Kharashaadka Dacwadda
Codsiga FOIA ee Dhibcahaaga
Luqadda Wax-ka-Beddelka ee lagu hagaajinayo Wareegga 2
Nasiibka ugu Fiican, Farxadna u leh Caawinta
Ugu dambeyntii, dacwada marwalba lama saadaalin karo - waad guuleysan kartaa, waad khasaari kartaa - laakiin si kastaba ha noqotee waxay qaadan doontaa waqti oo qaali noqota.
Waxaad ka heli doontaa xaqiiqooyin dhab ah oo ku saabsan sida loo sameeyo wax ka qabashada dalabkaaga diidmada kansarka ee Illinois.
Ma Ka Heli Kartaa Maalgelintaada KPMG?
Haddii aad lacag badan ku bixisay oo KPMG ay ku calaamadeysay cabashadaada qalad, soo ogow waxa sababa falalka aad kula kici karto iyaga tirinta 3 iyo 4 ee cabashada.
Caawinaad ka hel Rafcaanka Codsigaaga
Cadaalad Bulsho ama Halyeey Bulsho
Maxaad tahay sinnaanta bulshada? 1 Mawduuc	|	1 Quiz
0% Buuxi	Tallaabooyinka 0 / 1
Halyeey Bulsho Sinaan Mise
Waa Maxay Qiimaha Rafcaanka
Kani ma tallaabo Fasal baa?
Qiimaha Dib U Eegista Maamulka 1 Quiz
Maxay yihiin Kharashyada Rafcaanka Kiiskaaga?
FOIA Codso Dhibcaha Codsigaaga
Sida loo Codsado Dhibcahaaga (FOIA)
Xukun, Goob & Taag
Taagan & Goobta
Gargaarka Wadajirka ah - TRO & Prelim Injunctions
Ku Xadgudubka Nidaamka Sharciga
Ku Xadgudubka Dib u Eegista Maamulka
Jabinta Xiriirka Ka dhanka ah KPMG
Faro-gelinta Cadaadiska leh ee Rajada Ganacsi ee Ka Dhanka ah KPMG
Wax ka beddelka CRTA si loo ilaaliyo sinnaanta bulshada
Koofiyadaha Shatiga Wareega 2aad & Xuduudaha Halyeeyga
Muddada Dib U Eegista Buundada
Waqtiga Fikirka Labaad
Maxaad Sameyn Kartaa Marka Dambe?